Apple neSamsoni mudiwa kuunza AirPlay 2 uye iTunes Mafirimu kumaterevhizheni ekambani yeKorea | IPhone nhau
Apple uye Samsung mudiwa kuunza AirPlay 2 uye iTunes Mafirimu kumaterevhizheni ekambani yeKorea
Muridzi weAirPlay tekinoroji ndiApple uye hapana mumwe munhu. Izvo zvakabvumira iyo kuti igadzire yakavharwa ecosystem iyo mukati kana iwe uchida kuishandisa, iwe unofanirwa kupfuura kuburikidza nechishandiso kubva kukambani. Kunyangwe chiri chokwadi kuti muiyo Android Play Chitoro uye kunze kwayo, isu tine edu ekushandisa manyorero anotibvumidza isu teedzera mashandiro eAirPlay mumaseti-epamusoro-mabhokisi anotarisirwa neApple, iko kuita hakusi kwakanyanya.
Kusimbisa kufamba kwakasiyana siyana kuri kuitwa neApple mumakore achangopfuura, kugadzira masevhisi matsva uye kuvhura zvigadzirwa zvitsva kudzikisira kutsamira kwe iPhone, Samsung yakazivisa, mukati mehurongwa hweCES 2019 irikuitwa mazuva ano muLas Vegas, kuti materevhizheni ayo Dzichava dzinoenderana neAirPlay 2 uye zvakare ichave nekuwana mafirimu, akateedzana uye terevhizheni zvinoratidzwa neApple kuburikidza iTunes.
Materevhizheni ese anotangwa nekambani yekuKorea Samsung gore rese anoenderana neAirPlay 2 uye achave nekwaniso yekushandisa iyo inopa mukana weTunes Movies neTV Shows. Neraki, Samsung yakafunga nezve vashandisi vakavandudza terevhizheni mukati megore rapfuura uye sekusimbiswa, Aya mamodheru anozotsigirawo ese ari maviri mabasa kuburikidza neye firmware yekuvandudza.
Tsigiro yeAirPlay 2 ichave ichiwanikwa munyika 190 apo kambani yeKorea inotengesa mamodheru ayo, nepo mukana weiyo iTunes bhaisikopo katalog ichave ichiwanikwa mune dzinopfuura nyika zana chete. Kutenda kune AirPlay 100, vashandisi vane iPhone, iPad kana Mac vanozokwanisa tumira zvemukati kubva kumidziyo yako zvakananga kuSamsung materevhizheni usati wamboshandisa Apple TV.
Uye zvakare, nekuda kwechibvumirano ichi, vese vashandisi vakatenga mafirimu kana nguva nenguva kubvarura mafirimu kuburikidza iTunes vachakwanisa kuzviita. zvakananga kubva kuSamsung TV yako usina kumbobvira watendeukira kune yako iPhone, iPad kana Mac.
Eddy Cue akataura mushure mekuzivisa chiziviso.
Tinotarisira kuunza iTunes uye AirPlay 2 ruzivo kune vamwe vatengi kutenderera pasirese kuburikidza neSamsung Smart TVs, ichipa vashandisi ve iPhone, iPad neMac imwe nzira yekunakidzwa nezvose zvavanofarira zvemukati pachiratidziri. Chikuru mumba mako.
Este Haisi yekutanga danho rakaitwa naApple mumwedzi ichangopfuura kuyedza kusvika kune vamwe vatengi nekuti kwemavhiki mashoma, iyo Amazon Echo inoenderana neApple Music, chimwe chinhu icho vashandisi veApple Music vanga vasina kuronga kutenga HomePod chaicho vakatenda uye ndiani yakawedzera kufarira kutengesa kweAmazon Echo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Apple uye Samsung mudiwa kuunza AirPlay 2 uye iTunes Mafirimu kumaterevhizheni ekambani yeKorea